Mamorona tranokala famandrihana mivantana tsara indrindra ho an'ny fanananao miaraka amin'i Zeevou
Ireo mpitantana ny fanofana fialan-tsasatra dia mihalasa vahana amin'ny fandoavana ny vola miditra amin'ny komisiona. Misy hetsika tsy mitsaha-mitombo hatrany mankany amin'ny fandraisana famandrihana mivantana bebe kokoa ary hahatonga ny fantsona hiasa ho anao fa tsy ny mifanohitra amin'izay!
Rafitra fitantanana fananana maromaro sy Channel Managers manolotra tranokala famandrihana mivantana. Na izany aza, mazàna dia misy olana maromaro ireo. Amin'ny tranga sasany, mety misy sarany isaky ny famandrihana ho an'ny famandrihana mivantana, izay mampiato hevitra ireo mpampiantrano tsy hiasa mafy hahatonga ny famandrihana hikoriana amin'ny tranokalan'izy ireo. Ankoatr'izay, ny ankamaroany motera famandrihana ny mpamatsy dia tsy mamela anao hanara-maso tanteraka ny fivezivezenao amin'ny alàlan'ny fitaovana toa Google Tag Manager, izay tena ilaina raha te handany vola Google Ads or Facebook Ads.
Amin'ny tranga toy izany dia mila afaka manaraka ny anao tanteraka ianao ROI mba hahafahanao manapa-kevitra ny amin'ny teny fanalahidy hanokana ny teti-bolanao! Ankoatr'izay, amin'ny ankabeazan'ny tranga, ny tranonkala natolotry ny mpanome rindrambaiko fandraisam-bahiny dia tsy mamela anao hanampy pejy manokana na bilaogy amin'ny alàlan'ny rafitra, midika izany fa mila manana tranokala misaraka ianao ary mampifandray izany amin'ny motera famandrihana nomen'ny ny PMS.
Ahoana no ahafahan'ny tranokala famandrihana mivantana an'i Zeevou manampy?
Zeevou dia manolotra tranokala famandrihana mivantana maimaimpoana ho an'ny rehetra (na evanjelista na Patron) izay manapa-kevitra ny hiara-hiasa sy hanohana ny The Direct Booking Revolution! Tsy vitan'ny hoe mahazo built-in ianao motera famandrihana izay mamela ny vahiny hametraka famandrihana eo noho eo, fa misy entana maro hafa miandry anao.
Zeevou Show dia hipetraka eo noho eo ny tranokala miaraka amin'ny fampahalalana momba ny fanananao, ny karazana unit, ary ny unitanao, araka ny tafiditra ao amin'ny pms. Ny famaritana, sary, fampitaovana ary tsikera dia haseho avokoa mba hanomezana ny vahininao ny vaovao rehetra ilainy amin'ny fotoana anaovana famandrihana ary hampitomboana ny fahafahanao manova ny mpijery ho mpamandrika.
Raha mamorona pejy ho an'ny firenena, tanàna ary fananana rehetra hidiranao ao amin'ny rafitra i Zeevou, tsy izany ihany no ataonay ho anao. Rehefa misoratra anarana ianao dia hanome anao ny santionany amin'ny politika momba ny famerenam-bola sy ny pejin'ny politika momba ny tsiambaratelo izay azonao jerena sy hamaranana hahazoana antoka fa mahafeno ny fepetra takian'ny lalàna ao amin'ny faritra misy anao izany (tsy afaka mandray andraikitra aminao izahay amin'ny fampiasana ireto ohatra ireto). Ankoatr'izay, azonao atao ny manampy pejy manokana araka ny itiavanao azy.
Ny pejy rehetra ao anatin'ny Zeevou dia manana ny fitaovana namboarina rehetra izay takinao mba hahazoana antoka fa tsara fanahy araka izay tratra ny tranokalanao. Izahay dia mamela anao hametraka lohanteny meta, famaritana meta, teny lakile, ary koa Tags Tags OpenGraph ho an'ny fizarana media sosialy (na Facebook na Twitter Tags). Izahay koa dia mamokatra sitemap feno amin'ny tranokala iray manontolo, izay azonao alefa amin'ny alàlan'ny Google Search Console hanatsara ny laharanao.
Ankoatry ny fampiraisana amin'ny Google Analytics, Zeevou dia mamela anao hiantoka ny tranokalanao havaozina hatrany amin'ny alàlan'ny atiny vaovao ao amin'ny faritra misy anao amin'ny alàlan'ny fiasa bilaogy ao anatiny. Io dia manala ny filànao hanana tranokala WordPress na Wix misaraka amin'ny motera famandrihanao. Ary raha mihazakazaka eo ambanin'ny marika marobe ianao, dia takianay ianao! Zeevou dia hamorona tranokala isaky ny marika natsanganao ao anaty rafitra, ary azonao atao koa ny mivarotra fananana eo anelanelan'ny marika.
Aza matahotra anefa! Tokony efa nanokana fotoana sy / na vola ve ianao amin'ny fametrahana ny anao manokana WordPress tranokala handefasana famandrihana mivantana, azonao atao ny mampiasa ny plugin WordPress anay hamerenana ny vahininao amin'ny pejy valin'ny fikarohana ao amin'ny motera famandrihana nefa tsy tsapany akory fa nandao ny tranokalanao izy ireo! Ankoatr'izay, ny ekipanay ao Zeevou dia namolavola iFrame izay ahafahanao mampiditra ny widget fitadiavana amin'ny anao Wix pejy fandraisana na antoko fahatelo hafa tranonkala mety efa nanangana ianao.
Tahaka ny fikosoham-bolo sasany ho an'ny mofomamy, manome alalana anao koa izahay hanisy script manokana raha te hampiditra safidy mivantana amin'ny chat ianao toa ny Hubspot's na Tawk.to's chat live live widget. Ary farany, amin'ny alàlan'ny fampidirana ny nomeraonao WhatsApp ao Zeevou, hasehontsika ho azy ny bokotra WhatsApp miresaka amin'ny tranokalanao, mba hahafahan'ny olona nasainao mifanerasera aminao amin'ny fanontanina mety ananany taloha na aorian'ny famandrihana. Ny fahazoana antoka fa manana ny fitaovana ilainao hanomezana ireo vahiny vahininao traikefa miavaka dia iray amin'ireo laharam-pahamehana indrindra!
Mba hanampiana anao hahazo famandrihana mivantana bebe kokoa dia azonao atao koa ny manao dokambarotra maimaimpoana ny fanananao rehetra (tsy misy sarany fananganana, tsy misy vidiny isan-taona, tsy misy komisiona - maimaim-poana!) Amin'ny Zeevou Direct rehefa misoratra anarana amin'i Zeevou ianao.
Ireto misy ohatra amin'ny tranokala famandrihana mivantana noforonin'i Zeevou:
Airhost ho anao
Ny mpikambana ao amin'ny ekipa rehetra ao Zeevou dia manana tanjona mitovy amin'izany, izay mampiseho aminao ny Revolisiona Famandrihana mivantana! Noho izany, azonao itokisana mora foana ny anay Toetoetra ary mankafy mahita ny fitomboan'ny orinasanao!